ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “တို့ရွာမှာ…”
ဒါပေမယ့် လျှောက်တွေးမိပြန်တော့ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည် ရွာတွေက ဟိုးခေတ်ကနေ အခုထိတိုင် ပုံစံ မပြောင်းလဲတာက သိပ်မဖြစ်သင့်တော့ဘူး ထင်မိတာပဲ။ ဆိုလိုတာက မြန်မာ့ကျေးလက်ဟန် ယဉ်ကျေးမှုပုံစံကို ပြောင်းလဲ စေချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ- မနက်စောစော ကျွဲချိုမှုတ်တဲ့ လုလင်က ရောင်နီလေး ပျို့လာတော့ သူဆင်းရမယ့် လယ်ထဲကို ဟိုင်းလတ်ကားနဲ့သွား၊ စပါးပေါ်ချိန်ကျရင် စပါးဈေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို မြို့ပေါ်ကို ဆဲလ်ဖုန်းနဲ့လှမ်းမေး…။ နွားဆိုတာကို ကျေးလက်စရိုက်လေး မပျောက်အောင် ထိန်းထားရုံသဘော လှည်းယဉ်ကျော့ကျော့သာ အဆွဲခိုင်း…။ အင်း…၊ ဖြစ်တော့ ဖြစ်လာမယ် ထင်ပါတယ်ဗျာ။
ကျနော်လဲ ကိုပေါလိုပဲ ရွာကို တခေါက်တော့ ပြန်ချင်သေးတယ်ဗျာ။
ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းမဝေးရအောင် ကြိုးပမ်းကြသေးတာပေါ့ဗျာ။ မှတ်ချက်ရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
sorry, i don't know how to write burmese with computer.
But i realy glad to read all your articles especialy this one.
I'm at france, n me too do for free burma.
N i'm sure that if we work all together we can return back our motherland.